Futurama: Game of Drones dia azo alaina amin'ny Android | Androidsis
[APK] Miandry anao i Bender, Fry ary Leela ao Futurama: Game of Drones
Manuel Ramirez | | apk, Lalao Android, Tutorials
Ora vitsy lasa izay dia fantatsika fa ny Fox Digital Entertainment sy Wooga, studio ho an'ny fampandrosoana lalao video monina any Berlin, dia nahavita fifanarahana mandefa lalao video momba ny Futurama. Iray amin'ireo andiam-panentanana tsara indrindra nataon'ny mpamorona ny The Simpsons ary afaka mahita olo-malaza tena tsy manaja sy mampihomehy toa an'i Bender, Fry ary Leela isika, na dia tsy afaka manadino ireo maro hafa koa isika izay nanetsika an'ity andian-tantara ity ho karazana hadalana ao amin'ilay iray fa ny science fiction no niavian'ny tantara hafahafa sy mahatsikaiky indrindra.
Ankehitriny dia miverina amin'ny lalao video antsoina hoe Futurama: Game of Drones izay afaka azonao atao ireto mpilalao telo ireto misintona amin'ny faran'ny fidirana avy amin'ny APK. Lalao noforonin'i David Grossman, Jonathan Myers ary Patric M. Verrone ary izany dia hahatonga anao hihomehy hahatsiarovanao ireo fotoana epic tamin'ny andiany fahitalavitra mihetsika. Amin'ny endrika ankamantatra sy ny drôna sasany ho toy ny sombintsombiny, tsy maintsy ho fantatrao ny fomba fampifangaroana azy ireo amin'ny fomba tsara indrindra hahafahana manampy ireo olona telo fanta-daza nanolotra fahafinaretana be dia be anay tamin'ireny taona ireny izay afaka nanatrika ny vanim-potoana tsirairay tamin'ny andian-tsarimihetsika lehibe ho an'ny fahitalavitra.
1 Ny trio aces amin'ny Android-nao
2 Piozila miaraka amin'ny fiavian'i Futurama
2.1 Amin'ny lafiny teknika
4 Download App
Ny trio aces amin'ny Android-nao
Nandritra ny fiandrasana ny fanambaràna ho lasa fiandrasana amam-bolana maro dia afaka miditra amin'ny APK izahay hankafizantsika ity lalao video ity izay tsy maintsy hifaninanantsika amin'i MomCo amin'ny ady varotra. Ny script ny lalao dia avy Ny sain'i David Grossman, izay niasa tamin'ny tsiambaratelon'ny Secret Monkey Island sy The Wolf among Us; Jonathan Myers, izay fantatsika aminy Game of Thrones: fiakarana; ary Patric M. Verrone, iray amin'ireo mpikambana voalohany tao amin'ny ekipa mpanoratra Futurama.
Amin'izany isika dia afaka milaza fa ny fahafinaretana dia azo antoka tanteraka amin'ny lalao video izay mpisolovava ho ankamantatra Candy Crash Soda karazana. Ny mekanika dia tena tsotra satria tsy maintsy manambatra drôna efatra na mihoatra amin'ny fomba samihafa ianao. Toy ny amin'ity karazana lalao ity dia hanana drôna manokana izay mitovy amin'ny baomba manafoana ny laharana na tsanganana iray manontolo isika.
Piozila miaraka amin'ny fiavian'i Futurama
Amin'ity fotokevitra fototra ity no hatrehinay andian-tsarimihetsika komik izay ahitantsika ireo protas amin'ity andiany ity na ny efijery misy ny haavon'ny sambon-danitra izay hitondra antsika amin'ireo dingana samihafa izay hahazo fahasahiranana rehefa mamita azy ireo isika.
Eto indrindra no misy ny Futurama: Game of Drones no misongadina indrindra, satria manangona fihetseham-po mitovy amin'ny miditra amin'ilay andiany mihetsika isika miaraka amina kalitao tsara amin'ny lafiny rehetra. Ireto sary an-tsary ireto dia ahitanao ny tanan'ireo saina misaina telo izay mitondra antsika ity piozila lehibe ity izay afaka manolo tanteraka ny hafa izay hitantsika ao amin'ny Play Store toa ilay nolazain'i KING.
Ka raha mpankafy an'ity andiany ity ianao dia aza mangataka ela ny misintona ny APK hiditra amin'ity lalao video mahafinaritra ity izay mampivondrona ireo singa mety hitranga rehetra iray amin'ireo nilalao indrindra manomboka izao ao amin'ny Play Store ary miaraka amin'ny Game of Drones dia manao firesahana mazava momba ny Game of Thrones (Game of Thrones) tsy mampino.
Amin'ny lafiny teknika
Avy amin'ny inona ny script an'ny tantara an-tsary, izany fiaramanidina mihetsika amin'ny 3D Mba hampianarana ny ambaratonga tsirairay na ny maikan'ny lalao, ny zava-drehetra dia miavaka amin'ny lafiny manan-danja indrindra toy ny feon-kira, sary ary vokam-peo.
Lalao mahafinaritra be sy izany miavaka amin'ny lokony ary ireo endri-tsoratra izay mifangaro mitaky ny hanaovana an'ity studio, fantatra amin'ny anarana hoe Wooga ity, amin'ny fotoana hafa miaraka amin'ny lohateny hafa avy amin'ny andiany Futurama animated. Filokana tsara amin'ity andro mangatsiaka ity izay mety hivaingana ny rantsan-tànanao rehefa maniry ny hanao fitambarana drôna mihoatra ny 4 ianao.
Sintomy ny APK an'ny Futurama: Game of Drones
Futurama: Lalao Drone
Ny toetran'ny andian-tsarimihetsika amin'ny Android anao
Haavo teknika tsara amin'ny lafiny rehetra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » apk » [APK] Miandry anao i Bender, Fry ary Leela ao Futurama: Game of Drones
Notsapainay tsara ny Xiaomi Mi Band 1s
Mamoaka famandrihana 3 amin'ny Wauki Selection XNUMX volana maimaim-poana izahay